I-KDE Plasma 5.22 iza kwi-Backports PPA kwaye baphakamisa i "hype" ye-v5.23 | Ubunlog
I-Plasma 5.22 isandula ukufika kwi-Backports PPA kwaye i-KDE sele iphakamisa i-hype yenguqulo elandelayo
IPlasma 5.22 Ndiyafika NgoLwesibini odlulileyo, kwiiyure ezimbalwa thina sisebenzisa i-Kubuntu + Backports PPA kunye Iprojekthi ye KDE i-hype sele ikhulile ngokukhutshwa kwePlasma 5.23. Nate graham kuqinisekisa ukuba imeko-bume esandula ukukhutshwa ijolise kakhulu ekusebenzeni, kwaye ngoku lixesha kwakhona lezinye iitweaks ezinamandla. Phakathi kwabo, umxholo weBreeze uya kuhlaziywa ngamaqhosha amatsha, iimenyu, iibhokisi zokujonga, kunye nokunye.
Ngokuphathelene noko kusandula ukufika, uGraham uthi yonke into ihambe kakuhle kwaye zimbalwa iindawo eziyimfuneko ezizakufika ngoLwesibini olandelayo kunye nokuphehlelelwa IPlasma 5.22.1. Ngapha koko, nangona ekhankanya ukuba zimbalwa, uninzi lwezinto ezilungisiweyo abazibandakanyayo kule veki zizezalolu hlobo lwendalo. Apha ngezantsi unoluhlu abaye baqhubela phambili kulo namhlanje.
1 Iimpawu ezintsha eziza kwi KDE desktop
2 Ukulungiswa kwamaphutha kunye nokuphuculwa kokusebenza
3 Ukuphuculwa konxibelelwano
4 Konke oku kuza kufika nini kwi KDE desktop
Iimpawu ezintsha eziza kwi KDE desktop
Umxholo weBreeze uya kuhlaziywa ngee-tweaks kumaqhosha, iimenyu, iibhokisi zokujonga, amaqhosha erediyo, izilayida, kunye nokunye (iPlasma 5.23).
Izithonjana zeefayile ngaphakathi kweendawo ezifihliweyo, ezinje ngePlasma Vaults, ngoku zivelisiwe kwaye zibonisiwe njengoko kulindelwe, kodwa azigcinwanga, ukuphelisa ukuvuza kwedatha (UMarcin Gurtowski, iDolphin 21.08).
Inkxaso kaKate LSP ngoku ifikelela kulwimi lwenkqubo yeDart (Waqar Ahmed, Kate 21.08).
UKonsole ngoku uxhasa umgangatho we-DECSET 1003, okuthetha ukuba izixhobo zesoftware ezinje nge-vim exhomekeke ekulandeleni imouse ngoku iyasebenza (uLuis Javier Merino Morán, Konsole 21.08).
Ayisiyongqongqo le projekthi ye-KDE, kodwa iyasichaphazela: umphathi we-SDDM wokungena ngoku angasebenza njengesoftware yaseWayland ngaphandle kokufuna iX11 kwaphela (Aleix Pol Gonzalez, SDDM 0.20).
UKonsole ngoku wenza iinkqubo ezichanekileyo zokucofa ekunene (uLuis Javier Merino Morán, Konsole 21.08).
I-emacs xterm-mouse-mode ngoku isebenza eKonsole (Luis Javier Merino Morán, Konsole 21.08).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, imiboniso eyongezelelweyo ngoku ifunyenwe xa kusetyenziswa ukuseta okuninzi kwe-GPU (Xaver Hugl, iPlasma 5.22.1).
Isantya sewijethi sisebenza kwakhona (UDavid Redondo, IPlasma 5.22.1).
Idatha yemozulu ye-BBC yewijethi yemozulu iyasebenza kwakhona (i-API itshintshile kwaye kuye kwafuneka siphendule) (UJoe Dight, iPlasma 5.22.1).
Kwiseshoni yePlasma Wayland, imvelaphi ebonakalayo yokutshintsha komsebenzi ngoku ihlala ifiphele njengoko kulindelwe (iVlad Zahorodnii, iPlasma 5.22.1).
Kwisicelo sePlasma System Monitor, umbono othi "Fumana amaphepha amatsha" ngoku uvula indawo entle endaweni yekholamu emxinwa (uDan Leinir Turthra Jensen, uPlasma 5.22.1).
Iindlela ezimfutshane ezinqumlayo "Zula iiNkqubo" (ezinxulunyaniswe no-Alt + `ngokungagqibekanga) ngoku ziyasebenza (Andrew Butirsky, Plasma 5.22.1).
Iphepha lokuKhangela kwiFayile kwiiNkqubo ezikhethwayo akusekho maxa wambi libonisa izihloko eziphindiweyo ezingaqhelekanga (Marco Martin, Plasma 5.22.1).
Iphepha eliphinda lenziwe ngokutsha le-Autostart kwiiNkqubo ezikhethwayo ngoku zihlala zibonisa i icon efanelekileyo yezicelo ezilungiselelwe ukuba zisebenze xa ungene (Nicolas Fella, IPlasma 5.22.1).
Xa usebenzisa imigaqo emininzi yeefestile, iphepha leMithetho yeFestile yokuKhethwa kweNkqubo ngoku ikhawuleza kakhulu ukulayisha kunye nokubonisa (Ismael Asensio, Plasma 5.23).
Amaphepha akhubazekileyo kuLiso lweNkqubo awanakukhubazeka okwethutyana ukuba ibar yakho esecaleni iwile kwimowudi ye-icon kuphela (iArjen Hiemstra, iNkqubo-sikhokelo 5.84).
Ukungena kwimowudi yeqela ku-Elisa, uluhlu lokudlala luzikrwelela ngokuzenzekelayo kwingoma edlalayo ngoku ukuba ayijongwa, kwaye ikrola ngokuzenzekelayo njengoko kufuneka ukuqinisekisa ukuba nayiphi na ingoma iyadlala.
Iincoko ze "Get New [Thing]" ngoku zisingatha iserver okanye iimeko ezicothayo ngobabalo (UDan Leinir Turthra Jensen, iiNkqubo-sikhokelo 5.84).
Izicelo zeQtQuick ezisebenzisa icandelo leKirigami OverlaySheet azisavumeli iphepha lichukumise imiphetho yefestile okanye yescreen (uDevin Lin, iiNkqubo-sikhokelo 5.84).
Konke oku kuza kufika nini kwi KDE desktop
IPlasma 5.22.1 iyeza ngoJuni 15 kwaye i-KDE Gear 21.08 izakufika ngo-Agasti, kodwa asazi ukuba loluphi usuku kanye. Ngale mini iiNkqubo-sikhokelo ze-5.83 ziya kufika, kwaye sele kulapho emva kwehlobo, iPlasma 5.23 iya kuhlala nomxholo omtsha, phakathi kwezinye izinto, ngo-Okthobha u-12.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » I-Plasma 5.22 isandula ukufika kwi-Backports PPA kwaye i-KDE sele iphakamisa i-hype yenguqulo elandelayo
Ukubonisana, ukufumaneka kwi-PPA, ngaba kungafakwa kwi-Kubuntu?
Ewe, kwaye sele ivela kule mpelaveki. Ukuba andiphazami, iPlasma 5.23 iya kubakho ngo-Okthobha kuba ixhomekeke kuhlobo olunye lweQt.
Ukubeka iliso, ukubeka iliso nokulawula iinkqubo zekhompyuter kwi-Ubuntu
I-FreeOffice 7.1.4, inguqulelo encinci elungisa iibugs kwaye iqhubeke nokuphuculwa kokuhambelana neOfisi yeMicrosoft